အင်းဝတွင် အပတ်စဉ် အမှိုက်ကောက် သန့်ရှင်းရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ဒေသခံများ ပူးပေါ? - Yangon Media Group
အင်းဝတွင် အပတ်စဉ် အမှိုက်ကောက် သန့်ရှင်းရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ဒေသခံများ ပူးပေါ?
အင်းဝ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅
မန္တလေးမြို့ သန့်ရှင်းရေးပရဟိတဆောင်ရွက်သူများမှ အင်းဝရှေးဟောင်း နယ်မြေအတွင်း အပတ်စဉ်အမှိုက် ကောက်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဖေဖော်ဝါ ရီ ၂၄ ရက် ညနေက ပြုလုပ်သည့် တတိယအကြိမ် အမှိုက်ကောက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အင်းဝ ဒေသခံများမှ ပထမဆုံးအကြိမ် လာရောက်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင် ရွက်ကြကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေးသန့်ရှင်းရေးပရဟိ တဆောင်ရွက်သူများက အင်းဝ ဒေသအတွင်း အမှိုက်ကောက်လုပ် ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်တွင်း ပြည်ပခရီးသွားဧည့်သည် သွားလာမှုများသည့်နေရာများ၌ ဖေဖော်ဝါ ရီ ၁ဝ ရက်တွင် ပထမအကြိမ်၊ ၁၇ ရက်တွင် ဒုတိယအကြိမ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး တတိယအကြိမ်အမှိုက် ကောက်ရာတွင် ဧည့်လမ်းညွှန် ၃ဝ ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရာ အင်းဝဒေသခံများပါ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ပူး ပေါင်းပါဝင်ခြင်းဖြစ်သည်။
”နိုင်ငံခြားသားခရီးသည် တွေ မြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာ အမှိုက် တွေ အပုံလိုက်ရှိနေတာကြောင့် Clean AVA ဖြစ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ အမှိုက်ကောက်လုပ်ငန်း စတင်ဆောင်ရွက် ဖြစ်တာပါ။ အခုတစ်ကြိမ်အမှိုက် ကောက်ရာမှာ မြင်းလှည်းယာဉ်အသင်းက ၁၂ ယောက်၊ လက်ပွေ့ခြင်း ဈေးသည် ၁၂ ယောက်၊ တံတားဦး အနှိုင်းမဲ့ပရဟိတအဖွဲ့၊ အိုးတုတ္တန်းနဲ့ အင်းဝလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ များက ၃ဝ လောက်ပူးပေါင်း ပါဝင်လာတာကြောင့် မကြာမီမှာ အင်းဝအမှိုက်ကင်းစင်တော့မယ် လို့ ပြောနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု မန္တလေးသန့်ရှင်းရေးပရဟိတ အဖွဲ့မှ ဦးဝင်းဇော်ဦး (ဧည့်လမ်းညွှန်) က ပြောသည်။
တတိယအကြိမ်စုပေါင်းအမှိုက်ကောက်ရာတွင် ဒုဋ္ဌဝတီမြစ်ကူးတုိ့ဆိပ်မှ အိုးတုတ္တန်းလမ်းဘေး ဝဲယာတစ်လျှောက်နှင့် မြို့ရိုးအတွင်း လမ်းဘေးဝဲယာ၊ မြို့ရိုးအပြင်အရှေ့ ဘက်လမ်းမကြီးအတိုင်း အင်းဝဗားကရာသစ်သားကျောင်းတော် ကြီးအထိ အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲ၍ အမှိုက် ကောက်ကြရာတွင် တံတားဦးစည်ပင်မှ အမှိုက်သိမ်းကားနှင့် တံတား ဦးမီးသတ်တပ်ဖွဲ့တို့မှလည်း ပါဝင်ကူညီပေးကြောင်း သိရသည်။
ရက်ကန်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်သို့ ပိုမိုရောက်ရှိရေး အတွက် ရိုးရာ ရက်ကန?
မူဆယ်မြို့ တွင် ဂိုဒေါင်တစ်လုံးမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့